अर्थ – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
एनआईसी एशिया क्यापिटलले सुरु गर्यो मेरो सेयर सेवा, के छन यसमा सुविधा ?
प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०७४, बिहीबार
काठमाडौं १२ साउन । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड विहिबारदेखि मेरो सेयर सेवा सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत अनलाइन मार्पmत खातामा भएका सेयर कारोबारको जानकारी लिन सकिन्छ । यो सफ्टवेयर मार्फत डिम्याट खाता खोलेका व्यक्तिहरुले आफ्नो खातामा भएको कारोबारको..
नेपाल बंगलादेश बैंकमा व्यापक घोटला, उच्च अदालतद्धारा अन्तरिम आदेश जारी
प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०७४, मंगलवार
काठमाडौं ३ साउन । नेपाल बंगलादेश बैंकमा व्यापक घोटाला भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार बैकको हकप्रद बिक्रि तथा वितरणमा घोटला भएको तथ्य बाहिर आएको छ । बैकमा भएको घोटलाका बारेमा समाचार बाहिर आएपछि उच्च अदालत पाटनले नेपाल बंगलादेश बैंकको नाउँमा अन्तरिम..
निर्वाचन आयुक्तको लागि १५ करोडको गाडी !
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०७४, शनिबार
काठमाडौं ३१ असार – करोडौं मूल्यका गाडी हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि करिब १५ करोडका विलासी गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्वाचनपिच्छे करोडौंका गाडी खरिद गर्दै आएको आयोगले यसपटक पनि प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका..
नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटको अनुमति भारतले नदिने
प्रकाशित मिति: २७ असार २०७४, मंगलवार
काठमाडौं २७ असार । नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटलाई भारतले अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको छ । नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटबाट ढुवानी गर्न अनुमति मागे पनि भारतले अनुमति नदिने संकेत गरेको छ। जसका कारण खाना पकाउने एलपिजी ग्यास ढुवानीमा भारतीय..
काठमाडौं, फाल्गुन १७, २०७३- मदिरा सेवन निरुत्साहित गर्न गतसाता मात्रै नयाँ नीति आएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पूरक कानुनहरू पनि बन्दै छन् । सेवन र कारोबारमा कडाइ गर्ने काम भइरहेका बेला महँगा विदेशी रक्सीका पारखी भने बढिरहेका छन् । भन्सार विभागको..
सांसद विकास कोषः मोरङमा यसरी हुँदैछ खर्च
प्रकाशित मिति: १३ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार
१३ फागुन, बिराटनगर । सरकारले सांसद विकास कोषको बजेट बर्सेनी बढाउँदै आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा ठूलो धनराशी खर्च भए पनि उपलब्धी भने न्यून देखिने गरेको छ । मोरङ जिल्ला पनि यो समस्याबाट अछुतो छैन । सरकारले गएको वर्ष प्रति सांसद १ करोड ५० लाख खर्च..